कांग्रेसको घोषणापत्रअन्तर्गत काम गर्नेछु : रेणु दाहाल – Chitwan Post
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २७, २०७४
नेकपा माओवादी केन्द्रकी पोलिटव्युरो सदस्य एवम् अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी महासचिव रेणु दाहाल अहिले भरतपुर महानगर पालिकाको मेयरकी उम्मेदवार रहेकी छिन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी भएका कारण पनि रेणुको उम्मेदवारी अहिले चर्चामा रहेको हो । कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर उनीलाई सहयोग गर्ने भएपछि मेयरमा निर्वाचित हुनेमा रेणु विश्वस्त छिन् । उनीले आफू निर्वाचित भएपछि भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसले नगर विकासका लागि अघि सारेको घोषणा पत्र अन्तर्गत कामगर्ने बताइन् । प्रस्तुत छ उनीसँग चितवन पोष्टकर्मी बसन्त पराजुलीले गरेको कुराकानी :
१. तपाई माओवादी केन्द्रवाट भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ अहिले घरदैलो गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो प्रतिकृया पाउनु भएको छ ?
– जनताको घर दैलो गर्दैगर्दा मैले उत्साहजनक सहभागिता पाएको छु । यसवाट म विशेष खुशी छु । समय अभावको कारणले सम्पूर्ण नगरवासीको घर–घर जान नसकेपनि जनताले जुन ढंगको ममता म प्रति दर्साउनु भएको छ, यसले मेरो विजयलाई सुनिश्चित गरेको छ । जनसमुदायलाइ भावी योजना र मेरो परिकल्पना राख्दा सकरात्मक प्रतिकृया पाएको छु । मलाई विजय भएर भरतपुरलाई उत्कृष्ट शहर बनाएर जाने आत्मविश्वास बढेको छ । जनसमूदायको सकरात्मक सुझावले भरतपुरको यथार्थ चित्र पाएको महसुस गरेको छु । मुलतः म उत्साहित नै छु ।
२. तपाइँले अहिले मतदाताहरु सँग भेट्दै गर्दा जित्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– सर्वप्रथम चितवन आफैमा ७६ आंै जिल्ला हो । यहाँको जनसमूदाय सचेत छन् । मेरो उम्मेदवारीले सुन्दर नगरी भरतपुरको विकास र सम्वृद्धिमा केन्द्रीय स्रोत र साधनसँग जोडेर एउटा नमूना शहर बनाउने प्रण गरेको छु । जुनकुरा जनसमूदायले वुझ्नु भएको छ । जनता नै निर्णायक शक्ति हो । मेरो जन्मभूमिमा एकपटक जनताको सेवा गर्ने अवसर दिनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
३. तपार्इंको पार्टीले नेपाली कांग्रेससँग चुनावी एकता त ग¥यो तर कांग्रेसजनले तपाईलाई भोट दिने कुरामा कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ ।
– कांग्रेस राजनिती सस्कार भएको पार्टी हो । राष्ट्रिय राजनितीमा कांग्रेस र माओवादी बिच सत्ता साझेदारी रहेको र संविधान कार्यन्वयन गर्ने चुनौती पनि यिनै दलमा छ । जसका निम्ति कांग्रेस र माओवादी विच सहकार्य अनिवार्य छ । यो राजनैतिक सहकार्यले पैदा गरेको समीकरण हो । त्यसैले यो एकतासँग लोकतन्त्रवादीहरु उत्साहित भएकाले भोट हाल्नेमा विश्वस्त छु । मैले बुझेअनुसार माओवादी र कांग्रेस बिचमा चितवनमा कहिलै पनि तिक्तता छैन । त्यसैले पनि कांग्रेसजनले मलाइ भोट हाल्नुहुने छ ।
४. भोट फ्लोरक्रस गरेर गोलाकार भित्र हसिया हथौडामा भोट हाल्न रुखमा भोट हाली रहेकाहरुलाइ गाह्रो हुन्छ कि भनेर भनेको ?
चुनाव चिन्ह प्राविधिक कुरा हो । राजनैतिक सहमति प्रमुख कुरा हो । नेपालकै उदाहरण दिने हो भने द्वन्द्वमा रहेका हामी माओवादी र कांग्रेस लगायतका राजनैतिक शक्तिहरु विच सहमति सहकार्य र एकता गरेर शान्ति प्रकृया सम्पन्न गर्दै अहिले संविधान जारी गरेको अवस्थासम्म आइपुगेका छौ । मुलुकको आवश्यकताले राजनैतिक सहमति भएको हो । आस्था र विचार फरक भएपनि राजनैतिक समझदारीमा एक अर्कालाइ सहयोग गर्ने कुरा अनौठो कुरा होइन । अहिले कांग्रेस र माओवादीको सहकार्य राष्ट्रको आवश्यकता हो । त्यसैले कांग्रेस मित्रहरुले पनि वुझ्नु भएको छ की दुबै पार्टीको आवश्यकताले हामी एक ठाउँमा उभिएका हौं । हामीलाइ उहाँहरुले भोट हालेर मलाई विजय गराउनु हुने छ । हामी पनि उहाँहरुलाइ भोट हालेर विजय गराउने छांै ।
५. तपाईंलाई त चितवनवासीले त्यति सारो चिनेका छैनन् । के प्रचण्ड पुत्री भएकै कारण भोट दिन्छन् त ?
– सबभन्दा पहिला म चितवनसँग अपरिचित मान्छे हैन । पटक पटकको निर्वाचनमा यहीको मतदाता भएर सहभागी रहँदै आएको छु । मेरो राजनैतिक जीवन कलिलै उमेरमा चितवनवाटै शुरु भएको हो । राजनैतिक कार्यक्षेत्रका हिसावले मेरो पार्टीको आवश्यकतामा जहाँ जहाँ पठायो त्यै गएर आफ्नो भूमिका निभाउँदा चितवनमा कार्यक्षेत्रका हिसाबले नजोडिँदा नौलो लागेको हो । तर चितवनको वस्तुगत धरातल प्रति म अनविज्ञ छैन । मन मुटु र भावनाले म चितवनकै छोरी हँु । म अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा भूमिका निभाउन गएको हुँ । अधिकार प्राप्त गरि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा म आफ्नो जन्म भूमिलाई कर्मभूमी वनाउँदै बाँकी राजनैतिक जीवन चितवनमै बिताउने गरी आएको छु । राजनैतिक विचारका हिसावले मेरो बुबा प्रचण्ड प्रति गर्व गर्छु । उहाँकै मार्ग निर्देशनमा हिँडेको छु । लडाइँका मोर्चाहरुमा अग्रभागमा नेतृत्व गरेको अनुभव छ । कहिले म जनयुद्धको तुफानी केन्द्रमा नेतृत्वमा रहे भने कहिले काठमाण्डौको शहरमा सडक आन्दोलन गरे । आज सिंहदरबारको अधिकार गाउँ नगरमा ल्याएर योगदान गर्न म चितवन आएको छु । मेरो आफ्नै राजनैतिक इतिहास र परिचय प्रति चितवनवासी अनविज्ञ छैनन् वास्तवमै चितवनका जनसमुदायले मलाई माया र ममता गरेर अत्याधिक मतले जिताउनु हुने छ । मेरो इमान्दारिता मेरो परिचय हो । लगनशिलता मेरो जीवन हो । जनताको सेवा गर्नु कर्तव्य ठान्दछु । बाँकी व्यवहारमा परीक्षण गर्न जनतामा अनुरोध गर्दछु । जहाँ प्रचण्डकै छोरी भन्ने सवाल छ प्रचण्ड मेरो बुबा मात्रै हैन राष्ट्रको नेता हो । एउटा कार्यकर्ताले पाउने सुविधा मैले पाउनुपर्ने मेरो अधिकार हो । यसमा मलाई गर्व छ ।
६. त्यसो हो भने तपाइँ जनताबाट निर्वाचित हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– प्रकृयाले त म विजय घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ । जनताको अपार समर्थन र मायाले म विजयी भै सकेको छु ।
७. तपाइँले जित्नु भयो भने नगर पालिकाको विकासका योजनाहरु के–के छन् त ?
– मेरो पहिलो सपना भरतपुरलाइ सम्मृद्ध र आधुनिक शहर बनाउने हो । मेरो पहिलो काम नमुना विकास सहितको वैकल्पिक राजधानी बनाउनु रहने छ । यस्तै भरतपुरलाई व्यवस्थित शहरीकरण गराँउदै महानगरमा मेट्रो रेल, भरतपुर विमानस्थलमा रात्रिकालिन सेवा गराउने छु । भरतपुर अस्पताललाइ शिक्षण अस्पताल बनाउँदै महानगर भित्र आफ्नै नगर अस्पताल बनाइने छ । भरतपुरमा विकास हुँदै गरेको मेडिकल सिटीलाइ व्यवस्थापन गर्दै यसको विकास गरिने छ । पर्यटन विकासलाई टेवा पु¥याउन चितवन देखिने भ्यू टावर, आधुनिक मनोरञ्जन पार्क, हरेक वडामा बालबगैचा र उद्यान निर्माणमा जोड दिइने छ । वातवरणका हिसाबले एकघर दुई रुख रोपिने छ । पर्यावरणीय मापदण्ड का आधारमा उद्योगहरु सञ्चालन गरिने छन् । सूचना प्रविधिलाई निशुल्क इन्टरनेट र फ्रि वाइफाइ क्षेत्र बनाइने छ । साथै सामाजिक सुरक्षाका हिसावले केन्द्रीय सरकारले दिने भत्तामा महानगरबाट १ हजार रुपैयाँ थपिने छ । जनताका बसोबास भएका र सार्वजनिक सडकहरु कालोपत्रे गरिने छन् । महानगरपालिकामा भित्री र बाहिरी चक्रपथ निर्माण गरिने छ । सडक भौतिक पूर्वाधार महानगरको सापेक्षता अनुसार विकास गर्दै लगिनेछ । नारायणी र राप्तीको तटवन्धन गरी उकास भएको जमीनको प्रयोगमा ल्याइने छ । नारायणी नदीमा जलयात्राको विकास गरिने छ ।
राप्तीमा चुनावी सरगर्मी बढ्यो, तीन ठूला दलको त्रिपक्षीय भिडन्त
बुद्धको शान्ति सन्देश आत्मसात् गरौँ